CDL Vertical Multistage Stainless Steel Centrifugal Pump - China Shanghai SOG Pumps
CDL / CDLF rudzi kutwasuka multi-yaishandiswa products.It zvinogona kushandiswa kuratidza svikiro siyana kubva pombi mvura maindasitiri mvura panguva tembiricha dzakasiyana uye zvakasiyana kuyerera mwero uye kumanikidzwa. CDL mhando rinoshanda yokuudza dzisiri kungatikanganisa mvura, apo CDLF zvakakodzera zvishoma kungatikanganisa zvokunwa.
CDL rudzi kutwasuka vasiri rwokuzvipira priming multistage Centrifugal pombi, izvo nechido mureza electric motor. Injini goho mugodhi zvakananga richibatanidza pamwe pombi nomubato kuburikidza coupling. The kumanikidzwa nemishonga humburumbira uye wakaiswa pakati pombi musoro uye Inlet & Chikamu nzira yokubudisa pamwe mutsigiri nemipande. The Inlet uye nzira yokubudisa chiri panzvimbo pombi pasi panguva imwe chete. mhando iyi pombi zvinogona vakagadzirira pamwe akangwara mudziviriri kuti zvinobudirira kudzivirira kubva yakaoma-kumhanya, kunze danho uye zadzisa.
1) Mutete, dzakachena, asiri zvinobata moto uye non-putika mvura ine hapana granules zvikukutu uye fibers.
2) Liquid tembiricha: Normal tembiricha mhando: -15 ℃ ~ + 70 ℃; Hot mvura mhando: -15 ℃ ~ + 120 ℃
3) Ambient tembiricha: kusvikira + 40 ℃
4) Altitude: kusvika 1000m
5) Kana arambe achirema kana viscosity kuti nokupfuuridzirwa svikiro kunopfuura mvura, zvakafanira kuti asarudze uchityaira motokari dzakakwirira-simba.
Kukwanisa: 2 kusvika 500. ³ / h
Head: 15 kusvika 195 M
Kunyatsoshanda: 72% kusvika 92,5%
Kutenderera Speed: 2900 R / Maminitsi
Power: 0.37 kusvika 15 KW
Special zvinoda zvinogona nekambani.
1) Water Supply: mvura Sefa uye zvokufambisa muna Waterworks, boosting musoro Mapaipi, boosting pamatunhu-vosimba zvivakwa.
2) Industrial Boosting: muitiro aibuda mvura hurongwa, kuchenesa maitiro, mukuru-kumanikidzwa Washing hurongwa, moto kurwa hurongwa.
3) Industrial Liquid irikupa: kutonhora uye mhepo-kutonhodza hurongwa, bhaira mvura uye condensing ezvinhu, chinangwa muchina-aishamwaridzana, acids uye alkali.
4) Water Treatment: Ultra filtration hurongwa,
6) DISTILLATION System, separator, pool
7) Irrigation: munda kudiridza, mwaya kudiridza, dzichingochururuka kudiridza.
1. unozadza akanyudzwa mhepo dzaserera kutaipa maviri danda mureza motokari
2. Kudzivirirwa kirasi: IP55
3. Insulation kirasi: F
Zvichitevera ezvinhu ndiwo yakakodzera chokupika makakombama kuratidzwa dzinodzvova:
1. makakombama All dzinobva akayera netsika 50Hz: kugara gwenya nokukurumidza 2900rpm kana 2950rpm.
2. munyonga achishivirira zvinoenderana ISO 9006 mupanda A.
3. Kuyerwa zvinoitwa ne 20 ℃ mvura mhepo-free. kinematic viscosity kuti mm 2 / chik.
4. nokushanda pombi anofanira kureva kuita mudunhu zvinoratidzwa thickened munyonga kudzivirira overheating nokuda chiduku chokubuda mwero kana zadzisa kuti injini nokuda zvakare guru chokubuda unodiwa.
Previous: CDLF Vertical Multistage Stainless Steel Centrifugal Pump
Anti-ngura Centrifugal Pump
Bhaira Water Supply Pump
Building Water Pump
Cleaning System Water Pump
Energy Saving Waste Water Pump
High Pressure bhaira Feed Water Pump
High Pressure vavandudze Pipe Pump
High Kwidzai Building Pump
High Rise Building Booster Pump
Industrial Liquid chinoratidza Pump
Vasanaiwa nemvura Recovery Pump
Stainless Steel Multistage Water Pump
Stainless Steel Water achiparadzira Pump
Tsvina Water Pump
Water Recovery achiparadzira Pump
High Rise Building Water Supply Pump